Accueil > Gazetin'ny nosy > Madagasikara: Ny vahiny indray no hivarotra tany amin’ny Malagasy
Madagasikara: Ny vahiny indray no hivarotra tany amin’ny Malagasy
Miharatsy andro aman’alina ny raharaha momba ny fananan-tany eto Madagasikara. Raha vao tonga teo amin’ny fitondrana ingahy Hery Rajaonarimampianina ny taona 2014, dia isan’ny resaka nandeha be teto amin’ny firenena ny momba ny fivarotana tany amin’ny vahiny. Raha ny resaka tamin’izay dia nisy ny fikasana ny hanome tany ny vahiny. Nalaky niparitaka ny feo ary maro ny olona no tezitra tamin’izany ka nisy ny fanambarana indray fa tsy hivarotra tany ny fanjakana. Taorian’izay nefa dia nivadika tamin’ny fampanofana tany maharitra mandritra ny 99 taona indray ny raharaha. Mbola maro ihany koa no olona tsy nanaiky izany ka akory moa no fanehoan-kevitra nanameloka izany. Taty aoriana dia nivadika ho 50 taona indray ny fifanarahana izay nokasan’ny fanjakana hampanofana ny tany amin’ireo vahiny ireo. Mbola nitarika resabe teo amin’ny vahoaka ihany izany. Ankehitriny dia fantatra fa 30 taona no fepotoana nomen’ny fanjakana hanomezana tany ireo vahiny. Moa ve tsy efa varotra tanindrazana izany?
Maro ankehitriny ny vahiny mpitrandraka harena ankibon’ny tany eto Madagasikara no manao ity fifanarahana ity. Ny Sinoa no tena miditra amin’ny sehatra hatramin’izao. Maro no toerana efa lasan’izy ireo any ambanivohitra rehetra any. Mahakasika ny fitrandrahana tany misy vatosoa no tena ataon’izy ireo amin’izany. Tsy miraharaha izay Malagasy nipetraka teo amin’ny tany teo aloha fa avy hatrany dia mandroaka azy ireny amin’ny taniny no ataon’izy ireo. Maro ny ohatra efa noraisitsika teto amin’ity gazety ity mahakasika izany.
Tsy ny Sinoa ihany fa ny karana koa dia mamaritra tany be manodidina ny renivohitra isam-paritany maro. Misy ny ataony amin’ny anarany manokana misy ny amin’olona hafa ary misy ny ampitondrany anaran’ny orin’asany. Terena hiala amin’ireny tany ireny ny olona efa nipetraka teo nandritra ny taona maro. Bodoina fotsiny izao ny tanin’izy ireo.
Tsy ny karana ihany nefa fa ao koa ireo vazaha isan-karazany izay mamaritra ny tany etsy sy eroa. Maro ny tetika ampiasainy amin’izany ny hahazoany tanin’ny Malagasy. Matetika dia izy ireny no mahazo sehatra amin’ny fahazoana tany satria izy ireo koa no manam-bola hahafahana hanao izany.
Mpandeha tamin’ny fiarakodia mpitatitra olona iray no nanao ady hevitra mahakasika ny fananan-tany eto Madagasikara ity ka tsara ihany ny hhaalalana ny ahiahin’izy ireo. Toa izao indrindra ny namintinan’ity rangahy iray somary efa zokiny ny raharaha ity hoe “aza gaga ianareo fa ao aoriana kely ao, dia ny Malagasy indray no hivarotan’ny vazaha ny tany eto Madagasikara”.
Raha ny fandehan’ny raharaha ankehitriny izao dia mizotra tanteraka any amin’ny fomba fijery izany ny zava-misy eto amin’ny firenena. Porofon’izany ny tsy firaharahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny hamerenana ny vondro-nosy “iles Eparses” an’i Madagasikara. Jereny fotsy toa tsy an’ny fireneny sy ny razany izany amin’izao fotoana itondrany ny firenena izao.
Ny mahagaga dia nifandimby nivarotra tany ireo mpitondra firenena Malagasy nanomboka ny taona 2001. Ingahy Ravalomananan Marc ohatra dia nivarotra tany tamin’ny orinasa koreanina “Daewoo Corporation” ka tany aman’hetsiny maro no nanaovany fifanarahana tamin’izany. Io raharaha io no fototra ny nanonganan’ny olona azy ny taona 2009. Amin’izao fotoana izao dia amin’ny alalan’ny fanofana maharitra indray no
tetik’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Mbola zava-doza koa izany. Hatramin’ny fandraisana mpifindra monina avy any ivelany aza no efa resaka nandeha be teto amin’ny firenena fa homena toerana eto Madagasikara. Tafaverina amin’ny fanjanahan-tany vaovao indray i Madagasikar ankehitriny.